नेपाल समूहमा फूट आउने संकेत: गोकर्ण– योगेशको एउटै मत, घनश्याम र सुरेन्द्र द्धिविधामा - नेपालबहस
नेपाल समूहमा फूट आउने संकेत: गोकर्ण– योगेशको एउटै मत, घनश्याम र सुरेन्द्र द्धिविधामा
| ८:१९:४६ मा प्रकाशित
२४ जेठ, काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेर पुरानो पार्टी कमिटी व्यूताउन तयार रहेको बताएपछि माधव नेपाल समूहका धेरै नेताहरु द्धिविधामा परेका छन् ।
आइतबार साँझ पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट वक्तब्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने जनाउँदै सो प्रस्ताव गरेपछि नेपाल समूहका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा नजुट्दै फरक फरक धारणा आउन थालेको हो । उनीहरुबीच केही नेतामा समान धारणा र केही नेताहरु द्धिविधामा रहेको पाइएको छ ।
पार्टीलाई पूर्ववतः अवस्थाबाट सञ्चालन गर्न तयार भएका ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनबाट एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिन प्रस्ताव गरेका छन् । तर घनश्याम भूषाल लगायतका नेताहरुले भने त्यसमा आफ्नो नैतिकता जोडिएको भन्दै आनाकानी गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
उनको समूहभित्र रहेका गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरुले भने यसलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने नीति लिएको बताइन्छ । पाण्डे भने मौन रहेका छन् । उनीहरुबीच हिजो राती सुरेन्द्रको घरमा छलफल भएको थियो ।
आन्तरिक विद्रोहको तयारीमा रहेका खनाल–नेपाल समूहले आइतबार दिउसो विज्ञप्ति निकाले ओलीले वार्ताका नाममा चालबाजी गरिरहेको बताएका थिए । उनीहरूले कारबाही फिर्ता लिएमात्रै वार्ता अघि बढ्ने पनि बताएका थिए । त्यसको लगत्तै साँझ ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदाको वक्तब्य जारी गरेका हुन् । ‘नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् । मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ । आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ, यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्बाही नगरिने पूर्वाग्रह नराखिने छैन’, ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले पार्टीभित्र कुनैपनि प्रकारको भेदभाव नगरिने उनले बताएका छन् । ‘नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुने छ’ उनले भनेका छन् ।
ओलीको सो वक्तब्यपछि नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले कार्यदलले काम गर्ने बाटो खुलेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वमा संवाद हुने अपेक्षा समेत गरेका छन् । ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको एकताका लागि आज सार्वजनिक बक्तब्य मार्फत गर्नु भएको आह्वन मुलत सकारात्मक छ ।
कार्यदल स्तरको छलफललाई यो बक्तब्यले पुन निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरु सम्मिलित कार्यदलले स्पस्ट गर्नु पर्ने र मिलाउनु पर्ने थप बिषयहरुलाई समाधान गर्ने छ । सर्बोच्चमा बिचाराधिन बिषयमा सबै संभावनालाई ख्याल गर्दै र मुलतः संबिधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निश्कर्समा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ । सारमा अध्यक्षको बक्तब्यले पार्टीको शिर्ष नेतृत्वकाबीच सार्थक संवाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्घत पुग्ने अपेक्षा गर्दछु ।
हजार माईलको यात्रा पहिलो पाईलाबाट नै शुरु हुन्छ’, नेता भट्टराइले भनेका छन् । तर नेपाल समूहका रघुजी पन्तले भने अलिको ढुलमुले बक्तब्य आएकाले छलछाम मात्रै हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा संसद पुर्नस्थापनाका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने संकेत गरेका छन् । ‘यो प्रस्ताव अप्रयाप्त छ वक्तब्यमा लेखिएका भाषा अलि अस्पष्ट छन् ।
शुरुमा माधव नेपाल लगायत नेताहरुको कारवाही फिर्ता हुनपर्छ । संसद विघठनका विरुद्धमा अदालतमा जानु भएको साथीहरु केटाकेटी होइनन उनीहरुको राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले स्वेच्छाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । मलाई लाग्छ यो विषय अदालतको मुद्धा समेत प्रभावित पार्ने गरी आएको हुनसक्छ ।
हस्ताक्षर गर्ने साथीहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिने संभावना म देख्दिन । एकताको नाममा एउटा हात मिलाउने अर्को हातले छुरी धस्ने काम गर्नु हुँदैन, समय लाग्नसक्छ तर सम्मानजनक एकता नै उपयुक्त हुन्छ , यसक्रममा शीर्ष नेताहरुबीच कुराकानी हुने संभावना बढ्छ । कतै मुद्धा फिर्ता गराउने जाल मात्रै हो जस्तो लाग्छ पनि छ तर यो विषयमा साथीहरुले धारणा बनाउनु नै हुनेछ । अहिले म अस्पतालमा छु अस्पतालबाट मलाई लागेको कुरा यही हो’, पन्तले भने ।
एमालेको विवाद मिल्दा माधव नेपाल दोस्रो अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्री ? २२ घण्टा पहिले
निर्वाचन आयोगप्रति डा. भट्टराईको कटाक्ष १ दिन पहिले
जबर्जस्ती करणीका फरार प्रतिवादी पक्राउ ६ मिनेट पहिले
माइतीको संरक्षणमा बसेकी राईको बन्यो घर ११ मिनेट पहिले
शाङ्पा फाउण्डेशनद्वारा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग १८ मिनेट पहिले
उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, अब साँझबिहान हिँडडुलदेखि केही व्यापार गर्न पाइने १९ मिनेट पहिले
आज वाग्मतीसहित पाँच प्रदेशका ठूलो पानी पर्ने २७ मिनेट पहिले
एनआईसी एशिया क्यापिटलले असार १० गतेदेखि अर्को म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्दै ३८ मिनेट पहिले
आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु, साउनदेखि पढाई हुने ३९ मिनेट पहिले
मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न १ करोड जम्मा १७ घण्टा पहिले
युरोकप फुटबलमा स्लोभाकियाको विजयी सुरुवात १० घण्टा पहिले
निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा परिवर्तन: के-गर्न पाइन्छ, के-पाइँदैन ? १६ घण्टा पहिले
लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न सर्वोत्तम सिमेन्टले डाक्यो विशेष साधारणसभा ६ दिन पहिले
निषेधाज्ञाले कवाडी बेच्ने तामाङलाई छाक टार्नै गाह्रो १७ घण्टा पहिले
झापामा करेन्ट लागेर २ जनाको ज्यान गयो ४ दिन पहिले
नागरिकता नभएकै कारण गुम्यो जागिर ६ दिन पहिले
सरकारले घोषणा गरेको भत्ता चिकित्सकले अझै पाएनन् २ हप्ता पहिले
भारतमा बन्द गरियो प्लाज्मा थेरापी ४ हप्ता पहिले
नगरपालिकाद्धारा अस्पताललाई अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग ३ हप्ता पहिले
एमालेका ४ सांसदको पद जोगियो ५ दिन पहिले
डब्ल्यूएचओले भन्यो, यसै वर्षको अन्तिमसम्ममा कोरोनाकाे खोप आउछ १२ महिना पहिले
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा, कहिलेदेखि सुरु हुन्छ उडान ? ४ महिना पहिले
महरालाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन नेकपाको सुझाव २ वर्ष पहिले
अमेरिका र चीनले जलवायु परिवर्तको मुद्दामा मिलेर काम गर्ने २ महिना पहिले